Uluhlu lwemibala eyahlukeneyo ngokusetyenziswa kunye nokudityaniswa | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UManuel Ramirez | | Idizayini yeMifanekiso, Amaqhinga
Ngaphezulu okanye ngaphantsi konke Siyayazi imvakalelo okanye umbono onikwa ngumbala. Omnye wemizekelo ecacileyo bubomvu beplanethi enguMars ebonisa umlo okanye owamacherry, esiwuguqulelayo owesibini ukuya kwinkanuko. Ukwazi intsingiselo yombala ngamnye kuluncedo ukugxininisa inqaku kumyalezo we-meme, okanye nokuba kukujoliswa kombala wephalethi woyilo lwewebhu.
Kodwa kwenzeka ntoni xa sifuna ukudibanisa? Singathi iingxaki zibonakala zizama ukufumanisa ukuba olo luhlaza lunokulingana ngcono ngombala otyheli welamuni othambisa ubungqongqo benye okanye enye. Esinye sezitshixo kuyilo kukwazi ukukhetha umbala ochanekileyo ukuze ukuhlangana okubonakalayo kubonakale kumbukeli okanye kumsebenzisi ovula isicelo sethu okokuqala.
Ngale nto siya ngqo kwinto Kuthatha iliso eliqeqeshwe kakuhle ukufumanisa ngokukhawuleza ngowuphi umbala ohambelana nomnye ukunika intsingiselo ethile. Nokuba sifuna ukuqaqambisa umbukeli ngombono omangalisayo, ukutshona kwelanga okuthandanayo okanye imeko eguqukayo apho imibala eyahlukeneyo iyakwazi ukusinika imvakalelo yokuba umfanekiso uyahamba nokuba umile.
1.1 Umbala weorenji
1.2 Umbala oMfusa
1.3 Umbala omthubi
1.5 Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka
1.6 Umbala omnyama
1.7 Umbala oluhlaza
2 Umdibaniso wemibala edibeneyo
2.1 Classic kunye Retro
2.2 Ukukhanya kweblues kunye nemifuno
2.3 Iipepuli kunye neeorenji zokutshona kwelanga
2.4 Ukuzola kwe-blues yeMeditera
2.5 Ezintsonkothileyo kunye nokuzola
2.6 Iiblues zentaba
2.7 Ukuvuna ukusuka kwi-50s
2.8 Oluluhlaza kunye nobomvu
2.10 Ukuphakama kwendalo kwamazwe
2.11 Ulwandle kunye nesibhakabhaka sebheyi
Ngaphambi kokuba uqhubele phambili kwindibaniselwano yombala ontsonkothileyo, makhe yiya umbala emva kombala ukuze uthethe ngobume babo obuphambili kwaye loo mibala ehambelana nayo. Siza kuhlala sicebisa ukuba ukuzama yenye indlela yokufumana ezo zinto zidibeneyo, nangona besesitshilo, kufuneka sisebenze ngamehlo okanye sinetalente esizelwe kuyo yokuchonga indibaniselwano evela ngokwendalo.
Sijongene naloo mbala onokuwenza Bangela uburhalarhume obukhulu xa siyifumana njenge-lynchpin yoyilo lwe-Clockwork Orange yeStanley Kubrik. Nangona kunjalo, kuthetha intsingiselo yotshintsho, olwanamhlanje nolwembonakalo. Sijongene nenye yale mibala oyithandayo okanye ongayithandiyo, kodwa yeyantlandlolo.
Ithatha kakuhle ngepeyinti yeorenji kunye nombala ofana nohlaza. Kukwanemihlaba esinokumfumana kuyo, ngaphandle kwezinye ezibomvu. Ukuba asifuni ukwenza izinto nzima, ukuyibeka ecaleni kwoluhlu lwee-orenji kuya kuba yeyona ndawo iphambili kuyo.
Sele sazi ukuba kulo nyaka uzayo, i-2018, UV ngumbala okhethwe nguPANTONE. Umbala kuthiwa yimfihlakalo, engaziwa kunye nokuhlolwa kwayo yonke into eza kufunyanwa. Ukuvuselela kunye nokucinga, sijongane nenye yale mibala enxitywe ngamagcisa afana neNkosana.
Ukuba sijonga indibaniselwano, sinako mfumane kakuhle kakhulu ngemihlaba, uluhlu lweeorenji kunye nothotho lweetoni ezibomvu ezihlala zingaphantsi kakhulu kunezokuqala. Okuhlaza kunokuba ngumahluko olungileyo, ngakumbi xa ublue ngakumbi kunombala otyheli.
Omnye wemibala ekhangayo ekuqalekeni, nangona uhlala uhleli iya kuxhomekeka ukuba inombala obomvu ngakumbi kuneblue. Ukulinda iorenji kuhlala kwenza umbono uphumle, kodwa ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, ukubanda kuqala ukunika ezinye iintlobo zeemvakalelo ezinxulumene ngakumbi nomsindo. Umbala onzima ngokwawo.
Ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka singayibeka ukuba yenze umahluko olungileyo kwaye xa isondela nakweyiphi na imibala eluhlaza okwesibhakabhaka okanye ebomvu, iyakwazi ukudibana nabani. Singayibiyela ngeethoni ezimnyama ukuze ibonakale kakhulu kuyo nayiphi na imeko.
El umbala wokuthanda, wothando kwaye leyo inako ukusenza sizive ngakumbi. Ngomnye wemibala ephambili, ke ukuzinza kwayo kuxhomekeke kakhulu kuxhomekeke kwindlela esijongana ngayo nomnye. Singayigxininisa intsingiselo yayo ngwevu, ngelixa sijonga uluhlaza sinokuwunciphisa loo mdla kunye namandla anakho ukubonelela kuyo nayiphi na into yewebhu esiyisebenzisa kuyo.
Ngoluhlaza idibanisa kakuhle, kodwa iya kuxhomekeka kwithoni yayo. A umnquma uya kuhlala ulidlala elihle. Singakuthatha kuluhlu lweerandi ezimhlophe ukugqiba ezipinki.
Inkosi yemibala ebandayo kwaye ifumaneka kuyo yonke indawo ukunika, ekuqaleni, uzinzo, ukuzola kunye nokubanda. Kuya kufuneka ujonge kuphela endleleni ukufumana lo mbala kwinani elikhulu leemoto.
Singakudibanisa Uluhlu lweetoni eziluhlaza okwesibhakabhaka, njengoluhlaza kwaye bomvu. Ukuba asifuni ukubeka emngciphekweni uyilo oluthile, sinokuqiniseka ukuba asizukuphazama ukuba asiyiphazamisi kakhulu.
Ubumnyama, ukufa kunye nokuphelelwa lithemba kuvela ngombala omnyama, nangona inokunikwa enye intsingiselo ngobunewunewu nobuhle. Kuya kufuneka ubone ukuba ngumbala wemisila kunye nelokhwe yangokuhlwa yeegalasi.
Ngumbala idityaniswa ngokugqibeleleyo nazo zonkeNangona ikwazi ukubonelela ngengqondo yobunewunewu nobuhle.
Las Amandla ahlaziyekayo, indalo kunye neplanethi Banxiba ngokwenyani ukubonisa abaphilayo nabasempilweni. Kukwabangelwa yityhefu kwaye ukuba ujonga iimveliso zokucoca, uninzi lwazo zisebenzisa uluhlaza ukubonelela ngezi zivamvo.
IPodemos dibanisa nemibala yomhlaba njengoluhlu lwemifuno olusisa kolo hlobo kwaye lubonise imeko entle yempilo. Ngomdaka nayo ihamba kakuhle kakhulu.
Umdibaniso wemibala edibeneyo
Ezimbalwa indibaniselwano ezisisebenzelayo ukunika iingqondo ezahlukeneyo kunye noqikelelo ezibonwayo zoyilo lwewebhu, usetyenziso okanye umsebenzi apho kufuneka sifumane imibala emithathu okanye emine eluncedo ukukholisa ukujonga kwababukeli.
Classic kunye Retro
Ukuba sihamba mnyama, a luhlaza opholileyo oluhlaza, i-carmine ebomvu nomdaka, Siza kufumana umbala wombala osebenza ngokugqibeleleyo kwifoto yemoto ye-retro.
Ukukhanya kweblues kunye nemifuno
Iindidi ezahlukeneyo ze ukukhanya okuluhlaza kunye neblues emnyama kunye nephuziBayakwazi ukunika amandla okutshintsha kuyo nayiphi na imeko okanye into enokuba sisilwanyana esibonisa iintsiba zayo ezinamandla.
Iipepuli kunye neeorenji zokutshona kwelanga
Ukuba sifuna i emfusa ukuya kuorenji namthubi, Zonke zinako ukusithatha phambi kokutshona kwelanga okubomvu okuboniswa echibini ukunika indawo yonke egcwele ubomi kunye nemibala.
Ukuzola kwe-blues yeMeditera
Nge ukukhanya kakhulu ithoni emfusa kunye emnyama, zidityaniswe nebala elimdaka, sinokufumana indibaniselwano yokuphumla ukuyisa kwiMeditera kwaye sinike ukuzola okwaneleyo.
Ezintsonkothileyo kunye nokuzola
Ukuqala ukusuka kumnyama ukuya kwithoni emnyama kunye nokukhanya okungwevu, sinokukhetha mfusa omfusa kunye nombala owubonayo ukuba kunye zinokusetyenziselwa ukunika ubuhle kunye nokubonisa kwiiprojekthi ezahlukeneyo.
Uluhlu oluhle lwe Imibala eluhlaza okwesibhakabhaka ngombala oluhlaza ngakumbi Ingabonisa ipanorama ekwabonelela ngecala elizolileyo neligcinayo loyilo.
Ukuvuna ukusuka kwi-50s
Uthotho lwemibala omnye komnye zidibana kakuhle kakhulu ziluhlaza ngombala oluhlaza, enye eluhlaza okwesibhakabhaka kufutshane nohlaza, kunye nomnquma omnye, nangona ucacile, ukufumana indawo yeVintage.
Oluluhlaza kunye nobomvu
I-turquoise eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nobomvu iba indibaniselwano entle. Yongeza kumnyama, umbala ohlaza okwesibhakabhaka omnyama, kunye grey, kwaye isiphumo somdlalo wobungcali kuzo zonke iintlobo zeenjongo zoyilo.
Khetha iiblues ezintathu ezinikezela loo nto ukuba sisehlotyeni, luhlaza mnyama mnyama phantse mnyama kunye nohlaza esilushiye kuwo umbala. Lo mxube wemibala unamandla kakhulu kulo naluphi na uhlobo lwentengiso yehlobo.
Ukuphakama kwendalo kwamazwe
Imibala emnyama yomhlaba kunye nenye uthotho lwezimvi kunye nomnyamaBanako ukusihambisa basihambise kwimvisiswano ukubonelela ngobunzulu.
Ulwandle kunye nesibhakabhaka sebheyi
Umahluko we Umbala ofanayo obangela ukukhanya okuninzi xa bephathwa kwithambeka njengakwifoto ethathiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Uluhlu lwemibala: ukusetyenziswa kunye nokudityaniswa
UMara G Moreno sitsho
Inomdla kakhulu kwaye iyasebenza.
Iposti enkulu :)
Phendula uMara G Moreno
Bendingayazi le bhlog
Enkosi ngomsebenzi wakho. Ndiyigcina ukuba ifundwe kwaye ndinayo ukuze ndisebenze
Iingqayi ezinkulu ezili-100 njengomboniso kumyuziyam